Argentina zvakaitika mutemo mutsva mugodhi vhiki rino - China JP Metal & Equipment
Zviremera Argentine, indasitiri vatambi uye mibatanidzwa vanotarisirwa kusaina svondo rino refu akamirirwa mugodhi chibvumirano munhu yeUnited kuti zvinobatanidza huripo mitemo munyika, sezvo chikamu ziendamberi kuedza kusvetukira-kutanga mari iri nemauto.
Rudzi, kamwe kufarira pakuchera vanoita, rawa shure vavakidzani vayo Chile uye Peru pasinei rine vapfumi deposits hwemhangura, ndarama, sirivha uye zinc.
Kusvikira ikozvino, nemirau vemo vakanga kwete chete vakaoma, asiwo siyana, pamwe vanomwe nyika 23 mumatunhu zvizere Kurambidzwa kushandisa cyanide pamusoro kune dzezvakatipoteredza nezvokunetseka.
Sezvo kutora hofisi mukupera 2015, President Mauricio Macri yave kutora matanho ndiponesezve munyika mugodhi indasitiri. Mumwe seokutanga akanga kubvisa ane 5% mutero pamusoro mugodhi uye nesimba makambani muna February gore rapera.
Naiyewo yakabviswa ari kurambidzwa mugodhi makambani vatorwa kutumira mari akaita muArgentina kunze kwenyika.
Zvino, Kutarisirwa yake kuda kupfuura mumwe mutemo mugodhi munyika achitarisira kuti pave chinangwa kupfuura chinzvimbo Macri kuti - kune mbiri mubhizimisi iri nemauto kuti $ 25 bhiriyoni mumakore masere.
Mukutonga yapfuura President Cristina Fernandez, uyo yakawedzera hurumende rinoitwa , Argentina akagamuchira chete $ 10 bhiriyoni nokuda 2007-15 kumwedzi. Mumakore chete, Chile kuti migodhi upfumi totaled $ 80bn uye Peru vake $ 52bn.
Mutemo mutsva, munharaunda bepa La Opinión Korean inoshuma (muchiSpanish), zvinofanirwa kupa mutero nokutsiga makambani, kubatsira kudzivisa kurwisana nehurumende omunharaunda uye kukunda pamusoro rutsigiro munharaunda kuti migodhi, saizvozvo mufashoni sezvo hurumende yapfuura akaita namafuta indasitiri. Asi vanoongorora pana BMI Research kuyambira pedyo njodzi kuti aigona kumisa urongwa Mecri kuti:
"Usina Simba-pane-kutarisirwa Q117 upfumi mashoko zvinoratidza makata Ide zvinokanganisa for yedu chaicho GDP ikure 3.1% muna 20 17 uye nomukana wokuti shure kuti zvingakanganisa kukura mukana," vanonyora. "Kana Organic kukura asingadi zvigare pamusoro mwedzi kuuya, Macri kuti mubatanidzwa aigona kuneteswa muna October pezana-rokuti sarudzo, izvo zvinogona kuona policies zvoupfumi kunanaira kurutivi zvikuru interventionist mitemo vamutangira (...) Tichitevera yemigodhi indasitiri, chero kusuduruka kure bhizimisi Macri kwakaita noushamwari kuchinja kuti kaza mari uye nechokwadi akazoteverwa epakati izwi sarudzo chingangova kunonotsa zvimwe yokupedzisira mubhizimisi zvisarudzo. "
Nyanzvi BMI rinotii imwe ngozi vachauya vachibva wakawedzera nekushandiswa miners 'mvura kushandiswa, izvo kazhinji wedzera nokusawirirana pakati makambani uye munharaunda uye zvichiita kuti mamwe mirayiro.
"Kunyange zvazvo tichitarisira pfungwa iri kutsigira mugodhi indasitiri kukura panguva yeUnited pamwero kuti zvaizopedza dzematunhu nyaya, kupikiswa omunharaunda uye kumanikidzwa chaigona kurwadzisa Kukwezva Argentina ari mugodhi mari rwendo," BMI anogumisa.